Robert Mugabe Latest News - The Latest News on Robert Mugabe
World >> ROBERT MUGABE Latest News
ROBERT MUGABE	NOV 26, 2015 - New York Times
Op-Ed Contributor: To Beat Mugabe, Zimbabwe Needs a United Opposition
If Joice Mujuru joins forces with other opposition leaders, there is a chance they could oust Robert Mugabe together.
Op-Ed Contributor: To Beat Mugabe, Zimbabwe Needs a United Opposition,
Robert Mugabe Latest News
The 89-year-old British monarch was flying Thursday to the Mediterranean island of Malta, where she once lived as a young princess, for a summit of the Commonwealth, the post-colonial international alliance she has helped for decades to unite. Between 1949 and 1951, Elizabeth's husband Prince Philip was stationed on the island as a Royal Navy officer, and she lived the ...
Queen Elizabeth II visits beloved Malta and Commonwealth,
LUPANE, Zimbabwe, Nov 21 (Thomson Reuters Foundation) - When Thabiso Dube isn't helping his mother at home, the scrawny 8-year-old is working alongside her, doing odd jobs in exchange for food. He should be in class, but has virtually dropped out of school because he is always hungry, said his mother Sithandile Dube, of Lupane district in Matebeleland North province. ...
School Drop Out Rates Rise In Zimbabwe Amid Hunger Crisis,
NOV 22, 2015 - The Independent
Zimbabwe's Robert Mugabe will rule until he is 100 from special wheelchair, his wife claims
Robert Mugabe will continue as President of Zimbabwe until he is 100, governing from a “special wheelchair”, his wife has said. Tags:
Zimbabwe&#039;s Robert Mugabe will rule until he is 100 from special wheelchair, his wife claims,
NOV 21, 2015 - The Guardian
Robert Mugabe to rule Zimbabwe from 'special' wheelchair, says wife
Grace Mugabe, the first lady, tells supporters she wants her 91-year-old husband to remain in power for as long as he can still speakZimbabwe’s first lady says she plans to get a “special” wheelchair for her 91-year-old husband so that he can continue to rule. Related: ?Vuvuzelas, Pistorius and Mugabe’s warped rule: ?my six years in Africa Continue reading...
Robert Mugabe to rule Zimbabwe from 'special' wheelchair, says wife,